Ndị na-ahụ maka imeziwanye ụlọ Ere na mgbazinye n'ime Melbourne
Ahụmahụ Plumber Templestowe - Taylor & onsmụ
Taylor & Sons kwesiri ịbụ ebe ị na-aga ebe ọ bụla maka ụdị nsogbu ọ bụla na-eme n'ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ obibi ma ọ bụ nke azụmahịa. Otu ndi otu anyi puru iche nke Plumber Templestowe di nso na nso ebe a ma gha egosi ha oge. Anyị nwere ahụmịhe bara uru na ọrụ nlekọta na nsogbu nsogbu niile. Na ọ...
Ebiputara site na Taylor and Sons
nlele Ndị na-ahụ maka imeziwanye ụlọ Bipụtara 4 months ago
nlele Ndị na-ahụ maka imeziwanye ụlọ Bipụtara 3 years ago
Ebiputara site na NLK Plumbing
Ọstrelia, gọọmentị Commonwealth nke Australia, bụ mba nweere onwe ya nke mejupụtara ala ndị dị na mpaghara Australia, agwaetiti Tasmania, na ọtụtụ agwaetiti ndị pere mpe. Ọ bụ mba kachasị na Oceania na obodo isii kachasị ibu n'ụwa site na mpaghara niile. Onu ogugu ndi mmadu ruru nde 26 bu ndi mmadu buru oke ibu ma buru oke anya na ha na akuku ikpere anyanwu. Isi obodo Australia bụ Canberra, na obodo kachanụ bụ Sydney. Akụkụ ndị ọzọ dị n'obodo ukwu ahụ bụ Melbourne, Brisbane, Perth, na Adelaide. Limụ amaala Australia bi na kọntinent ahụ ihe dị ka afọ 65,000 tupu mmalite nke ndị ọrụ Dutch na-eme nchọpụta na mmalite narị afọ nke 17, onye kpọrọ ya New Holland. Na 1770, Great Britain kwụrụ ọkara mpaghara ọwụwa anyanwụ Australia ma buru ụzọ bie njem ikpe ntaramahụhụ ruo na New South Wales site na 26 nke Jenụwarị 1788, ụbọchị bụ ụbọchị mba Australia. Onu ogugu ha toro mgbe niile n'ime iri afọ sochirinụ, ka ọ na-erule oge ihe mgbapụ ọla edo nke 1850s, achọpụtara ihe ka ukwuu na kọntinent ahụ ma guzobe mpaghara ọchịchị ise ọzọ na-achị onwe ha. Na 1 Jenụwarị 1901, gọọmentị isii ahụ jikọtara aka, guzobe Commonwealth nke Australia. Ala Australia ka nwere usoro ọchịchị onye kwuo uche ya nke nwere ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-arụ ọrụ dị ka ọchịchị onye ome iwu nke gọọmentị etiti, nke nwere steeti isii na ókèala iri. Ọstrelia bụ kọntinent kacha biri, kacha mma, na nke mmiri ga-ebi, ọ nwere ala kachasị ala. O nwere ala nke 7,617,930 square (2,941,300 sq mi). Obodo ala ugwu, oke ya nyere ya ụdị mbara ala dị iche iche, na mbara ọzara n'etiti ya, oke ohia nke ugwu ugwu na ugwu ugwu, na ugwu di na ndida ya na ndida ya. Onu ogugu ndi mmadu, onu ogugu mmadu abuo na onu ogugu kilogram iri na otu, na-ano n’onye dicha ala n ’uwa. Ọstrelia na-esi ego ya enweta site na ụzọ dị iche iche gụnyere mbupụ mbupụ na igwu ala, nkwukọrịta, ụlọ akụ, mmepụta, yana agụmakwụkwọ mba.Eustralia bụ mba mepere emepe nke ukwuu, nke nwere akụnụba 14th kasị ukwuu n'ụwa. O nwere onodu aku na uba di elu, ya na onwa iri nke onu ogugu ndi mmadu. Ọ bụ ikike mpaghara ma nwee mmefu agha ndị agha kacha elu n'ụwa niile. Ọstrelia nwere ọnụ ọgụgụ mba asatọ kachasị ọnụ ọgụgụ n'ụwa, ebe ndị kwabatara na-aza 29% nke ndị bi na ya. N’inwe ndepụta nke mmepe mmadụ kachasị nke atọ na nke asatọ kachasị elu nke ọchịchị onye kwuo uche ụwa, mba ahụ nwere ogo ndụ, ahụike, agụmakwụkwọ, nnwere onwe akụ na ụba, nnwere onwe obodo, na ikike ndọrọ ndọrọ ọchịchị, yana obodo ukwu ya niile na-aga nke ọma na njikọ ụwa. nyocha sava. Australia bu onye otu United Nations, G20, Commonwealth of Nations, ANZUS, Organisation for Economic Copara-Development and Development (OECD), World Trade Organisation, Asia-Pacific Economic Cooperation, Pacific Islands Forum, na ASEAN Plus Six sistemụ.